ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: သံဇကာကွက်လေး
ဘာလို့ စိတ်မကောင်းစရာတွေကြီး မြင်နေ တွေ့နေ ဖတ်နေရပါလိမ့်နော် ..
လူတွေ လူတွေ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာကို တန်ဖိုးထားပြီး သင့်တယ် .. ဒါထက်ပို မနိမ့်ပါးရအောင်ပေါ့ .. ခုတော့ ကတုံးပေါ် ထိပ်ကွက်တယ် .. သူများ မျက်ခုံးမွှေးပေါ် စင်္ကြန်လျှောက်ချင်တယ် ..
ဖြေပါတယ် .. ဒီက ပိုက်ဆံရမှ သူတို့ မိသားစု စားလောက်မှာလို့ .. ဒါပေမယ့်ဟာ သူများ မျက်ရည်ပေါက် ကြီးငယ်ကျမှ ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ စားဝင်သလားး(((
မြန်မာပြည်က အဲဒီလို သံဇကာကွက်လေးတွေကိုလဲ သတိရမိတယ် မောင်မျိုးရေ ... ။
အဲဒီလို ပိတ်လှောင်ခံရမှာစိုးလို့ အမကတော့ ငှက်တွေ ငါးတွေ ဘယ်တော့မှ မမွေးဘူး။
သံဇကာကွက်လေးတွေ နောက်ကွယ်က အပြစ်မဲ့သူများ အမြန်ဆုံး လွတ်လပ်ကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းနေရတယ်။
ညီ ကြုံရတဲ့ ဘဝတွေက တကယ့်ကို စုံလွန်းပါလား၊ သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းက အမောတွေ ဆိုတာ တကယ်ပါပဲ၊ အထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ သံဇကာကွက်တွေက ဘဝများစွာကို ချိနဲ့စေတယ်၊ ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်...။
စိတ်ဆင်းရဲတယ်ကွယ်... ခက်တာက မြန်မာဆိုတဲ့အမျိုးက ကိုယ့်အချင်းချင်းထဲမှာတောင် ခေါင်းပုံဝင်ဖြတ်တတ်ကြတော့... အဲဒီအချက်ကတော့ အတော်ကိုဆိုးရွားလွန်းတယ်....
ညီလေးရေ...လောဘသားတွေလို့ ဖြေတွေးရင် ရပေမယ့် ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားချင်း စာနာရမယ့်အစား လူပေါ်လူကျောပြီး ခေါင်းပုံဖြတ်တာတော့ ဒေါသထွက်မိတယ်...နယ်မြေငြိမ်းချမ်းပြီး တံတားမြန်မြန်ဖွင့်ပါစေ...အားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရုံပဲ တတ်နိုင်ပါတယ်...
လူလူချင်း ဖျံကျ လက်ဝါးကြီးအုပ် သွေးစုပ် အမြတ်ထုတ်
ပွဲစားဆိုရင်လည်း ပွဲစားနဲ့တန်အောင်လုပ်ပါ ဒါပေမဲ့ စေတနာတော့ထားသင့်တယ် ကိုယ့်လူမျိုးချင်းချင်းကို။
ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်မှ မကူညီရင် တိုင်းတစ်ပါးက ကူညီဖို့တော့ ဝေးရောနော်
ရယ်စရာ ရေးတော့လည်း အူတွေတတ်
ဘ၀ သံသရာ.. ရှည်လျား ထွေပြား မနားတမ်းသွားကြမှာ.. ဘ၀ သံသရာတစ်ယောက် ဆင်းတစ်ယောက်တက် ဆက်လက်ထွက်ခွါလာ ... ( ... သီချင်း )
အဲ့လို စိတ်မကောင်းစရာတွေ တွေ့ ကြုံ့ တိုင်း ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ကူညီ၊ မနိုင်ရင်တော့ မျက်နှာလေး အသာအယာလွှဲနေဖို့ကလွဲလို့ ဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲမောင်မျိုးရယ်။ လောကကြီးမှာ စိတ်ကသွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်တဲ့အရာတွေ
အများကြီးမို့စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်များကြုံတွေ့ ခြင်းမှ ကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေလို့ ပဲ ဆုတောင်းကြတာပေါ့,,,,
တယ်ကောင်းတဲ့ အတွေးအမြင် မှတ်စုပါလား ဟရို့။ လေးစားပါတယ်။
လူဇိုး ညည်းလုပ်တာနဲ့ လူတကာက ဝန်ကြီးလား လို့ လာလာမေးနေကြပြီ . . . အဲ . . ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့လားလို့ . . .
တကယ် စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒီလိုတွေဖြစ်တာ ဘယ်သူ့ကို တရားခံရှာရမှန်းမသိတော့ ကံပေါ့လို့ပဲ ယိုးစွပ်ဖြေတွေးနေမိပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းထဲ မှာ သူတို့ ကိုယ့် အပေါ်အနှိမ် ဆုံးပဲ။